गुण्डा नाइके सांसद बने, 'के अब मनाङ्गेको उपाधि हट्ला त ?' | Citizen Post News
गुण्डा नाइके सांसद बने, 'के अब मनाङ्गेको उपाधि हट्ला त ?'
२०७५ माघ १५ गते ०९:२६
कास्की । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका चर्चित गुण्डाका नाइके मानिएका राजीव गुरुङ उर्फ 'दिपक मनाङ्गे' तत्कालीन नेकपा एमालेको सहयोगमा मनाङ ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी भए । शपथ लिनु अगाबै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनी कारागार चलान भए । जेलबाट छुटेर आएपछि शपथका लागि सर्वोच्चसम्म पुगे । यसअघि एक पटक शपथ खुवाउने लगभग निश्चित भएको थियो, तर विविध कारणले उनको सपथ हुन सकेन ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उनका लागि सोमाबर ऐतिहासिक दिन सावित भएको छ । अब उनी बैधानिक बाटोबाट नै सांसद बनेका छन् । अब उनीसँग जोरी खोज्ने प्रहरीले बाध्यताले भए पनि स्यालुट हान्नु पर्नेछ । उनलाई सोमबार गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नदीपुरस्थित प्रदेशसभा सचिवालयमा शपथ गराएका थिए ।
उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुस ६ गते कारागर मुक्त भएका थिए । लगत्तै उनले पुस ११ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा शपथका लागि निवेदन दिएका थिए । शपथपछि हसिलो मुद्रामा देखिएका उनले सरकारलाई कामको आधारमा सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, 'अब समग्र प्रदेशको साथसाथै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न सक्रिय हुनेछ ।' यतिखेर गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ-'के अब गुण्डाको नाइके भन्दै चिनिएका मनाङ्गेले पाएको त्यो उपाधि मेटिएला त ?'